အရိမေတ္တယျဗုဒ္ဓဝင် (ဤကမ္ဘာတွင်နောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမည့် မြတ်စွာဘုရား၏ ဗုဒ္ဓဝင်) | Myanmar Mp3 Album
Home / 2009 / August / 15 / အရိမေတ္တယျဗုဒ္ဓဝင် (ဤကမ္ဘာတွင်နောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမည့် မြတ်စွာဘုရား၏ ဗုဒ္ဓဝင်)
အရိမေတ္တယျဗုဒ္ဓဝင် (ဤကမ္ဘာတွင်နောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမည့် မြတ်စွာဘုရား၏ ဗုဒ္ဓဝင်)
ဤကမ္ဘာတွင်နောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမည့် “အရိမေတ္တယျဗုဒ္ဓဝင်” အားဂေါတမမြတ်စွာ ဘုရားမှ အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်မြတ်ကြီးအား ဟောကြားတော်မူပုံကို ချမ်းမြေ့ရိပ်မြိုင်ကျောင်းဆရာတော် (ပဲခူးဆရာတော်) ဘဒ္ဒန္တတေဇောသာရ မှ ပြန်လည် ဟောကြားထားသည့်တရား တော်ကို တရားချစ်ခင် သူတော်စဉ်များအတွက် ဓမ္မဒါနပြုလိုက်ပါတယ်။ (အချိန်ကလေးယူပြီး နာယူကြည့်ပါ၊ အရမ်းကောင်းပါသည်၊ ရှားရှားပါးပါး ရှာထားရတာပါ။)
PW for Part4: rambo
August 15, 2009 Damahha တရားတော်အခွေများ 31 Comments
31 thoughts on “အရိမေတ္တယျဗုဒ္ဓဝင် (ဤကမ္ဘာတွင်နောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမည့် မြတ်စွာဘုရား၏ ဗုဒ္ဓဝင်)”
ခုလို ရှားပါးတဲ့ တရားတော်တွေ တင်ပေးထားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
Thank you so much for Buddha Ta Yar Taw
thank u .may u free from drangers .
:21 :7 😆
a yan bae kg bar tae pyar..
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်..ဒီလိုတရားနာခွင့် ရသောကြောင့် … မိဘနဲ့ ဆိုင်သောတရားတွေလည်း..နာချင်ပါတယ်
I cannot download the file. Could you guide me through? thanks
Thanks ! ဆရာတော်ရဲ့အသံအေးအေးနဲ. အရမ်းနားထောင်လို.ကောင်းတဲ့တရားတော်ပါ။ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တိုင်းသိထားထိုက်တဲ့ နောက်ပွင့်တော်မူမယ့် အရိမေတ္တေယျဘုရားရဲ့ မဟာဗုဒ္ဒဝင် တရားမြတ်ပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင် ဗုဒ္ဓ၀င်နှင့် ဗုဒ္ဓဓမ္မ တေးသီချင်းများ ရချင်ပါသည်။
တရားတော်တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ အစုံဒေါင်းခွင့်ရလို့
ဒီဆိုဒ်လေးဟာ အားလုံးအတွက် အရမ်းတန်ဖိုးရှိလှပါတယ်
နောက်လည်းအသစ်တွေ များများတင်ပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျှက်
အိမ်မှာရှိတဲ့ ဆရာတော် အခွေက မကောင်းဖြစ်နေလို့နာ လို့မရ ဖြစ်နေတာ့အခု လို တင်ပေးထားတာ ကျေးဇူးတင်တယ်
တရားတော်ကို မနာရသေးပေမယ့် တရားတော်ရဲ့ အမည်နာမကို က ရိုသေလေးစား ပူဇော်ထိုက်တဲ့ တရားတော် ဖြစ်မှန်းသိနိုင်ပါတယ် …
အခုလို အမျိုးသာသနာ အတွက် ကြိုးစားလုပ်ဆောင် နေ တဲ့ အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င် လူငယ်အချင်းချင်း အားကျဂုဏ်ယူလေးစားမိကြောင်း…..
အခုလိုတင်ထားပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မှာလဲပဲ တရားခွေ တော်တော်များများရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်ဆီမှာရှိတဲ့ တရားခွေ တွေကိုလည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင်နေထိုင်ကြကုန်သော သတ္တဝါအပေါင်းတို့အား နာကြားစေလိုပါသည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပေး ရမယ်မှန်း မသိပါဘူး။ သိကြတဲ့သူများရှိရင် အကူအညီပေးစေလိုပါတယ် ခင်ဗျာ။
အခုလက်ရှိ ကျွန်တော် ထိုင်းနိူင်ငံတွင် တက်နိူင်သလောက် တရားခွေများကို လှူဒါန်းပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်နှင့်အတူ အလှူဒါနလုပ်ချင်ပါက ယခုလိပ်စာကိုဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်နိူင်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန် – (နိဗ္ဗါန်ဆော်အသင်း)
480/93 Venezia Residence, Petchaburi Soi-18, Petchaburi Rd,
Rajtavee, Bangkok – 10400, Thailand.
Ph ; 080-4544683 (ထိုင်းနိူင်ငံအတွက်)
; +66804544683 (International အတွက်)
အထက်ပါ အချက်အလက်များနှင့်လိပ်စာကို လူအများအားသိစေလိုပါကြောင့် မိမိတို့တက်နိူင်သလောက် လူအများအား ပေးပို့အကြောင်းကြာစေလိုပါသည်။
ဗုဒ္ဓဓမ္မတေးများလည်း http://www.burmaborn.com မှာစုံလင်စွာ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်
Thank you so much for this Tayardaw. I want the picture of Sayadaw for Dhamma Darna for this tayardaw.If you have it please send it to me. And one of my dhamma friend wants to listen about Man Nat(the angel who always harm to Buddha). If you have if please send it to me.
I forgot to leave my email for above comment. Please contact me at [email protected]
If you have picture of sayadaw who did the dhamma talk or if any one have dhamma talk about marnat (devil / satan) please contact me. Thank you very much.
အပိုင်း (၃) နှင့် (၄) ပဲ download လုပ်လို့ရပါတယ်၊ အပိုင်း (၁) နှင့် (၂) ကို download မရပါသဖြင့် ကျေးဇူးပြုပြီး download လုပ်ပြီးသူများ link တင်ပေးပါ (သို့) မေးလ် ပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
အပိုင်း(၄)က မရဘူးဖြစ်နေလို့ ကျေးဇူးပြုပါဦးနော်..
လုပ်ပါဦးဗျာ အပိုင်းလေး တစ်ခုတည်း ဒေါင်းလို့မရဘူး ကျန်တာတွေရတယ်၊ ကူညီပါဦးခင်ဗျာ။ အဆင်ပြေရင် ကျွန်တော့်မေးလ်ထဲကို ပို့ပေးလို့ရမလားမသိဘူး။ ကျွန်တော့်မေးလ်လေးထားခဲ့ပါတယ်။
[email protected] ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အပိုင်း၎ ကိုရှာကြည့်ပေးပါသေးတယ်။ နေရာတိုင်းပြတ်ကုန်ပြီ။ ရှာတွေ့ရင်ပြန်တင်ပေးထားပါ့မယ်ခင်ဗျ။
မောင်အက်တမင်ရေ အပိုင်း ၄ ကို ပြန်လည်တင်ဆက်ပြီးပါကြောင်း
rapidshare site ကအရမ်းလေးနေပြီ ဘယ်လိုဒေါင်းရမလဲ မသိပါ မေးလ်ထဲပို့ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ အဆင်မပြေသေးတဲ့ အတွက် ဖိုင်မရသေးပါ…
ဖိုင်လေးခုလုံးပေါင်းပြီး တင်ပေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ။ အဆင်ပြေသလို ယူလိုက်ပါဗျာ။
တရားအစစ်၊ တရားအမှန်တွေ တွေ့ကြပါစေ။